Oprah Winfrey, Gabadhii guusha hanatay - مركز الكتاب للبحوث والدراسات
نشرت بواسطة: نعيمة شيخ حسن في مقالات 22 مايو، 2019	0 179 زيارة
Naciima Xasan Xuseen, Qoraa
Oprah Winfrey, waxaa lagu tiriyaa mid kamid ah shakhsiyaadka guuleystay, waxay ka gudubtay saboolnimo baahsan iyadoo u tallaabsatay hodantinimo.
Dadaal iyo karti ay muujisay ayaa waxay ku hanatay guul weyn.
Oprah, waxay dhalatay 29-kii bishii Janaayo, sanadkii 1954-kii, waxayna ku dhalatay gobolka Mississippi ee dalka Mareykanka.
Waxay ka dhalatay qoys aad sabool u ah oo duruufo nololeed oo aad u liita la daalaa dhacayo.
Aabbeheed waxa uu ahaa Tima-jare. Hooyadeedna waxay ahayd shaqaale (Khaadimad) reeraha u adeegto.
Kolkii ay 6 sano gaartay ayay ku biirtay dugsisiga, waxayna aad ugu dadaashay waxbarashada iyadoo kaga duwaneyd ardayda kale ee asaaggeed ah dadaal dheeeraad ah iyo garaad aad u sarreeya, ilaa ay soo gaartay heerkii dugsiga sare kolkaasoo loo aqoonsaday inay tahay gabadha ugu shacbiyadda badan ee dugsiga. Taasina waxay ku hanatay hab la dhaqankeeda wanaagsan oo ay kula dhaqantay ardayda iyo macallimiinteeda.
Markii ay soo gaartay da’da 12jir, waxay la kulantay dhacdo xanuun badan, oo gilgishay noloshaeeda iyo mustaqbalkeedaba, kadib markii uu faraxumeeyay mid kmid ah qaraabadeeda, halkaasna ay uur ka qaadday, balse ma sii noolaanin ilmahaasi oo wuxuu saqiiiray saacado kadib dhalashadiisii.
Dhacdadaasi waxay ku reebtay saameyn xun, iyadoo billawday inay isticmaasho maandooriyaha noocyada halista ah, waxayna ku sigatay inay kmid noqoto kuwa nolosha ka dhacay ee mustaqbalkooda mugdiga galay.
Balse iskudayo badan oo ay reerkeeda sameeyeen ayaa ay ku beddeshay nolosheeda kuna dhaqaaqday tallaabooyin horumar leh.
Da’da 17jir markay gaartay ayay ka shaqo billawday idaacadda WVOL,
Halkaasna waxaa uga bidhaamay safarkeedii shaqo iyo isbeddelkii nafteeda u horseeeday nolol wanaagsan.
Waxay kasoo gudubtay dhibaatooyin, caqabado iyo halis badan oo nolosheeda mugdi gelin gaaaray
Waxay istustay in noloshu ay tahay halgan, ma huraanna ay tahay in la bixiyo dadaaal, si loo gurto miro wanaagsan.
Waxaa laga qoray Oraahyo badan oo ka turjumayo casharradii ay ka baratay noloshii adkeyd, waxaana ka mid ah:
” Loolankii aan soo maray ayaa waxa uu i baray in aan dadka dhibaateysan u damqado, maxaa yeelay waxaan fahmayaa xanuunka iyo in aad noqoto qof aanan la jeclayn”.
“Is biimeynta ugu weyn ee nolosha waa in aad la noolaato riyadaada iyo sida aad u hirgelin lahayd”.
“Anigi isuma arko gabar sabool ahayd oo mar uun soo can baxday, balse waxaan ahaa qof carruurnimadiisiiba aaminsanaa in uu naftiisa masuul ka yahayoo ay tahay in uu guuleysto”.
Oprah Winfrey, waxay noqotay gabar guul xaqiijisay, ka tallawday mugdigiii ku gadaannaa horteeda, oo dhexda u xiratay in ay nolol qurxoon iyo magacba hesho.
Halgankeedii dheeraa waxa ay ku heshay inay ka xorowdo noloshiii ciriiriga ahayd, iyo duruufihii baahsanaa oo ay kusoo kortay.
Waxaa lagu tiriyaa 100-kii qof ee taariikhda lagu xusay qarnigii 20aad.
السابق: التدابير الوقائية لتقليل وقوع الجرائم في المجتمع الصومالي
التالي: QAYBAHA MAANSADA